प्रदेश नं. १ का तीन हिमाली जिल्लामा इन्टरनेट पुग्दै - www.kchhakhabar.com
प्रदेश नं. १ का तीन हिमाली जिल्लामा इन्टरनेट पुग्दै
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र ११, २०७४ समय: १३:०७:४३
ताप्लेजुङ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक नम्बर प्रदेशका तीन वटा हिमाली जिल्लाका सबै वडा इन्टरनेट पुर्‍याउने भएको छ । ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा इन्टरनेट पुर्‍याउने भएको हो । काठमाडौंको मर्कनटाइल प्रालि लाई इन्टरनेट विस्तारका जिम्मेवारी दिइएको छ । २० करोड रुपैयाँको लागतमा विस्तार हुने इन्टरनेट वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थालाई दिइने भएको छ ।
मर्कन्टाइलका प्रबन्ध निर्देशक आमोदप्रताप रानाले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न सर्भे गरिसकिएको र आवश्यक उपकरण भित्र्याउने काम भइरहेको बताए । रेडियो रिपिटर टावर निर्माण गरेर इन्टरनेट विस्तार गरिने उनले बताए । सिन्धुलीबाट पूर्वका १० स्थानमा टावर बनाएर मात्रै इन्टरनेट पुर्‍याउन सकिने रानाले जानकारी दिए । टावर राख्ने र लिंक जोड्ने स्थानको सर्भे भइसकेको र टावरहरूमा लिंक जोड्दै आउनुपर्ने भएकाले अब एक वर्षको समय लाग्ने प्रालिले जनाएको छ ।
ताप्लेजुङमा एक नगरपालिका, आठ गाउँपालिका र ६१ वडा कार्यालय रहेका छन् ।
ताप्लेजुङमा ५६ सामुदायिक र सात वटा संस्थागत विद्यालय रहेको ताप्लेजुङमा ५१ वटा स्वास्थ्य संस्था हरेका छन् । सबै निकाय गरी दुई सय स्थानमा इन्टरनेट पुर्‍याउने सम्झौता भएको प्रालिले जानकारी दिएको छ ।
संखुवासभामा पाँच नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाका ५६ वडा छन् । ५७ स्वास्थ्य संस्था छन् । चीनसँग सिमाना जोडिएको जिल्लाको किमाथांकासम्म नै इन्टरनेट पुर्‍याउने गरी काम भैरहेको छ । विश्वको सर्बोच्च शिखर सगरमाथा रहेको सोलुखुम्बुका पनि सबै वडा, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पुर्‍याउने प्रालिले जनाएको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, तेस्रो अग्लो कञ्चनजंघा र पाँचौं अग्लो हिमाल मकालु रहेका यी जिल्ला सदरमुकाम बाहिर इन्टरनेटको पहुँच कमै मात्रै पुगेको छ ।